rmdc laghubitta bittaya sanstha ltd(rmdc laghubitta bittaya sanstha ltd) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
rmdc laghubitta bittaya sanstha ltd
आरएमडीसी लघुवित्तको नाफा घट्यो, ईपीएस रु. २२.४९
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाफा घटेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा आरएमडीसी लघुवित्तको नाफा २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा १८.६८ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा...
आरएमडीसी लघुवित्तको पौने ४ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामी, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पौने ४ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर आज असार १५ गतेबाट लिलामीमा राखिएको छ। आरएमडीसी लघुवित्तमा एनआईसी एसिया बैंकको स्वामित्वमा रहेको ३ लाख ८४ हजार ९९५ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिएको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ४४१ रुपैयाँ तोकिएको छ। बोलपत्र पेस गर्दा...
आरएमडीसी लघुवित्तको पौने ४ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आज (असार ६ गते) बाट पौने ४ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ। एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्तको ३ लाख ८६ हजार १९५ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिएको हो। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक वा जोकोही व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयर बजारमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम भइरहेकै बेला नियामक निकायहरुबाट आउने वक्तव्यबाजीले लगानीकर्ताहरु अन्यौलमा पर्दै आएका छन्। केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन र नेपाल धितोपत्र बोर्डले निष्कासन गरेको विज्ञप्तिले लगानीकर्ताहरु द्विविधिमा परेका छन्। दुवै निकायले बढ्दो...
आरएमडीसी लघुवित्तको सवा ४ लाख बढी कित्ता सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आज (जेठ १६ गते) बाट सवा ४ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्तको ४ लाख २७ हजार ५९५ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिएको छ। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक वा जोकोही व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न...
आरएमडीसी लघुवित्तको साढे ४ लाख बढी कित्ता आजबाट लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति?
काठमाण्डौ । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साढे ४ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर आज बुधबारबाट लिलामीमा राखिएको छ। आरएमडीसी लघुवित्तमा रहेको एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको संस्थापक समूहको ४ लाख ५८ हजार २५५ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिएको हो। लिलामी सेयरमा विद्यमान सेयरधनीका साथै जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुले आवेदन दिन...
आरएमडीसी लघुवित्तको नाफा ३५.५८% ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा झन्डै २० करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाको नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३५.५८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा...
आजबाट आरएमडीसी लघुवित्तको ४.५ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक सेयर आज आइतबारबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले आरएमडीसी लघुवित्तमा रहेको ४ लाख ५८ हजार ३५५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक, जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाले बोलपत्र पेस...
काठमाण्डौ। आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको झन्डै ४ लाख कित्ता संस्थापक सेयर आज (वैशाख २ गते) बाट लिलामी राखिएको छ। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेको स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्तको ३ लाख ९३ हजार ८०१ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखिएको हो। यो लिलामीमा सेयरमा योग्य इच्छुक विद्यमान संस्थापकहरु वा जोकोही व्यक्ति, कम्पनी,...
आरएमडीसी लघुवित्तको २.२० लाख कित्ता सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर आजबाट लिलामीमा राखिएको छ। आरएमडीसीमा रहेको एनआईसी एसियाको २ लाख २० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखिएको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरको न्यूनतम मूल्य ४३४ रुपैयाँ तोकिएको छ। लगानीकर्ताहरुले बोलपत्र पेस गर्दा न्यूनतम...
आरएमडीसी लघुवित्तको नाफा घट्यो, ईपीएस कति?
काठमाण्डौ । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको खुद नाफा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २१.४९ प्रतिशतले घटेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाको खुद नाफा ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाको खुद नाफा १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा संस्थाको...